सरकार डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न तयार |
सरकार डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न तयार
प्रकाशित मिति :2017-10-11 10:19:51
काठमाडौं / असोज २५— सरकार आमरण अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको माग सम्वोधन गर्न तयार रहेको छ । तर सरकारी पक्षको तर्क अनुसार संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधयेक पास गर्नेरनगर्ने विषय भने सरकारको नभएर एमाले र माओवादी केन्द्रको कोर्टमा रहेको छ ।
आफ्नो सुझाव र माथेमा कार्यदलको मर्मअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्नुपर्ने जस्ता माग राख्दै डा. केसी पछिल्लो ७ दिन देखि आमरण अनशनमा बस्दै आएका छन् ।
उनको मुख्य माग काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नहुने र एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मात्र मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनुपर्ने रहेको छ ।
यही विषयमा सहमति हुन नसक्दा केसीले अनसन तोडे पनि विधेयक पास हुन सकेको थिएन ।
शिक्षा मन्त्रालय भने डा. केसीको मागअनुसार विधेयक अगाडि बढाउन सहमत भएको छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता गगन थापाले बुधवार विहान डा. केसीलाई भेटेका थिए । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाले भने, “ डा। केसीको माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ । यसो भएमा अनसन तोडिने मात्र होइन, चिकित्सा शिक्षाको समस्या सदाका लागि अन्य हुन्छ ।”
भोलिको संसद बैठकमा डा. केसीको माग सम्बोधन गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने प्रयास हुने शिक्षामन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
माओवादि एमालेतिर लागेपछि बल यी दुई पार्टिको कोर्टमा देखिन्छ । अब यस्तोमा यी पार्टिको अडान के हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ ।
१० वर्षसम्म मेडिकल कलेज नखोल्ने माग सम्बोधन गर्दा मनमोहन मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो बन्द हुनेछ । जबकि अहिले विचाराधीन विधेयकमा आशय पत्र लिइसकेकाहरुको हकमा विधेयकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
यस्तै एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने डा। केसीको माग सम्बोधन गर्ने हो भने झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेज खुल्ने छैन ।
मनमोहन मेडिकल एमाले र बीएण्डसी कलेज माओवादी नेताहरुसँग जोडिएका छन् ।
यसरी हेर्दा अब सरकारले भनेजस्तै बल एमाले र माओवादीको कोर्टमै पुगेको देखिन्छ ।